Oviana no Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? | Resadresaka (Fizarana 2)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wolaita Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Oviana no Nanomboka Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 2)
Toy izao ny resadresaka fanaon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny olona. Aoka hatao hoe Solofo no anaran’ilay Vavolombelona, ary miverina mitsidika an’i Jaona izy.
FAMINTINANA NY NOFIN’I NEBOKADNEZARA
Solofo: Faly indray aho mahita anao, Jaona a! Manao ahoana ny fahasalamana?
Jaona: Salama tsara aho fa misaotra!
Solofo: Tsara izany. Faly aho fa afaka mianatra Baiboly indray isika androany. * Tamin’izaho tatỳ farany, dia niresaka isika hoe nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no milaza fa nanomboka nanjaka tamin’ny 1914 ny Fanjakan’Andriamanitra. * Hitantsika tamin’izay hoe misy porofo momba an’izany ao amin’ilay faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4. Tadidinao ve hoe inona ilay voaresaka ao?
Jaona: Hoe nanonofy nahita hazo ngezabe i Nebokadnezara Mpanjaka.
Solofo: Izay mihitsy. Nahita hazo avo be nanakatra ny lanitra izy, dia avy eo naheno anjely nandidy hoe kapaina ilay hazo, fa ny fotony ihany no avela eo amin’ny tany. Hiverina haniry indray ilay hazo, rehefa afaka “fe-potoana fito.” * Dia noresahintsika koa hoe nahoana no tanteraka indroa iny faminaniana iny. Tadidinao ve hoe ahoana no nahatanterahan’ilay izy voalohany?
Jaona: Tamin’i Nebokadnezara narary saina nandritra ny fito taona moa?
Solofo: Izay mihitsy. Noho izy narary saina dia tsy nanjaka elaela aloha izy. Tanteraka fanindroany anefa ilay faminaniana, satria azo lazaina hoe tsy nanjaka aloha Andriamanitra rehefa tsy nisy mpanjaka nisolo tena azy intsony tetỳ an-tany nandritra ny fe-potoana fito. Efa hitantsika hoe nanomboka tamin’ny taona 607 T.K. * ilay fe-potoana fito, tamin’i Jerosalema noravana. Tamin’izay no nanomboka tsy nisy mpanjaka nitondra ny vahoakan’Andriamanitra intsony tetỳ an-tany. Rehefa tapitra anefa io fotoana io, dia hanendry Mpitondra vaovao hanjaka amin’ny vahoakany izy, ary any an-danitra io Mpitondra io. Raha tsorina dia hoe rehefa tapitra ilay fe-potoana fito, dia hanomboka hanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra any an-danitra. Efa hitantsika izao hoe oviana no nanomboka ilay fe-potoana fito. Raha haintsika àry hoe hafiriana ilay izy, dia ho haintsika hoe oviana no nanomboka nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra. Azonao aloha hatreo?
Jaona: Ie! Tadidiko daholo amin’izay ilay noresahintsika farany.
Solofo: Andao àry isika hiditra lalindalina kokoa, dia hojerentsika ny halavan’ilay fe-potoana fito. Vao avy namaky momba an’io mihitsy aho satria tiako hotadidina ny hevi-dehibe. Andraso fa hiezaka hanazava azy tsara aho.
Jaona: Eny àry.
TAPITRA NY FE-POTOANA FITO, NANOMBOKA NY ANDRO FARANY
Solofo: Fito taona ara-bakiteny ilay fe-potoana fito, tamin’ilay izy tanteraka tamin’i Nebokadnezara. Fa tsy maintsy haharitra kokoa noho izany ilay izy rehefa tanteraka amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Jaona: Fa nahoana?
Solofo: Efa noresahintsika hoe nanomboka ilay fe-potoana fito rehefa rava i Jerosalema tamin’ny 607 T.K. Raha avy eo isika no manisa fito taona, dia ho tonga eo amin’ny taona 600 T.K. Tsy nisy na inona na inona niavaka nitranga anefa tamin’io taona io, mifandray amin’ny fitondran’Andriamanitra. Araka ilay noresahintsika iny koa, tamin’i Jesosy tetỳ an-tany, izany hoe taonjato maro tatỳ aoriana, dia hita tamin’ny teniny hoe mbola tsy tapitra ilay fe-potoana fito.
Jaona: Eny marina, tadidiko iny!
Solofo: Tsy fito taona ara-bakiteny àry ilay fe-potoana fito, fa naharitra ela kokoa.
Jaona: Dia naharitra hafiriana izany ilay izy?
Solofo: Manampy antsika hamantatra an’izany ny bokin’ny Apokalypsy, izay mifampiankina be amin’ny bokin’i Daniela. Lazainy ao hoe 1 260 andro ny fe-potoana telo sy tapany. * Raha ampitomboana roa àry ny fe-potoana telo sy tapany dia hanome fe-potoana fito, izany hoe 2 520 andro. Azonao aloha hatreo?
Jaona: Ie, azoko. Fa tsy hitako hoe aiza ho aiza amin’izany no ahitana hoe nanomboka nanjaka tamin’ny 1914 ny Fanjakan’Andriamanitra.
Solofo: ‘Ndraso fa hojerentsika amin’izay ny fifandraisany. Indraindray ao amin’ny faminaniana ao amin’ny Baiboly a, ny iray andro mira herintaona. * Raha ampiharina izany, dia ho 2 520 taona ilay fe-potoana fito. Raha manisa 2 520 taona manomboka eo amin’ny 607 T.K. isika, dia ho tonga eo amin’ny 1914 A.K. * Izay no nahafantaranay hoe nifarana tamin’ny 1914 ilay fe-potoana fito, ary tamin’io no lasa Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra i Jesosy. Mahavariana fa nanomboka tamin’ny 1914 no niseho maneran-tany ny zavatra efa nolazain’ny Baiboly hoe hitranga amin’ny andro farany.
Jaona: Inona, ohatra?
Solofo: Ohatra hoe ity Matio 24:7 ity. Nolazain’i Jesosy ato izay hitranga rehefa hanomboka hanjaka any an-danitra izy. Hoy izy: “Hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hamely fanjakana. Ary hisy mosary sy horohoron-tany any amin’ny toerana samy hafa.” Nilaza i Jesosy hoe hisy mosary sy horohoron-tany amin’io fotoana io. Tsy hitanao hoe betsaka ve izany maneran-tany, tato anatin’ny 100 taona?
Jaona: Ie, marina izany.
Solofo: Nilaza koa i Jesosy ao amin’io andinin-teny io fa hisy ady rehefa lasa Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra izy. Dia manamafy an’izany ny Apokalypsy. Voalaza ao hoe hisy ady mandritra ny fotoanan’ny farany, ary tsy ady an-trano fotsiny fa ady maneran-tany. * Tadidinao ve hoe oviana no nisy ady maneran-tany voalohany?
Jaona: Tamin’ny 1914, ilay taona lazainao hoe nanombohan’i Jesosy nanjaka! Ary iny indray no tsy hitako a!
Solofo: Rehefa ampifandraisina ilay faminaniana momba ny fe-potoana fito sy ny faminaniana hafa ao amin’ny Baiboly momba ny fotoanan’ny farany dia tena mazava. Resy lahatra izahay Vavolombelon’i Jehovah hoe lasa Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra i Jesosy tamin’ny 1914, ary nanomboka tamin’io taona io ny andro farany. *
Jaona: Mbola sarotsarotra amiko aloha ilay izy hatreto!
Solofo: Ara-dalàna izany. Izaho koa aza ange elaela vao nahazo tsara an’io e, araka ilay noresahiko anao iny. Fa enga anie ka ho azonao avy amin’iny resatsika iny hoe na dia tsy misy hoe 1914 aza ao amin’ny Baiboly, dia tena avy ao amin’ny Baiboly ny zavatra inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah momba an’io taona io.
Jaona: Efa ela mihitsy aho no nahamarika an’izany taminareo. Ianareo rehefa miteny zavatra dia tsy ny hevitrareo fotsiny no lazainareo, fa tohananareo amin’ny andinin-teny foana. Lasa saina ihany anefa aho hoe fa maninona Andriamanitra no tsy tonga dia nilaza tao amin’ny Baiboly hoe amin’ny 1914 i Jesosy no hanomboka hanjaka any an-danitra. Maninona ilay izy no nataony sarotra be?
Solofo: Tsara fipetraka izay fanontanianao izay. Betsaka tokoa ny zavatra tsy resahin’ny Baiboly mivantana. Fa raha tianao dia horesahintsika amin’ny manaraka hoe maninona no nataon’Andriamanitra saro-takarina ny hevitra ao anatin’ny Baiboly.
Jaona: Tiako izany ka!
Misy fanontaniana manitikitika ny sainao ve? Misy tianao ho fantatra ve momba izay inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fanaon’izy ireo? Aza misalasala àry manontany an’izay Vavolombelona mihaona aminao. Ho faly izy hamaly anao.
^ feh. 7 Mampianatra Baiboly maimaim-poana ny Vavolombelon’i Jehovah, ary misy loha hevitra isan-karazany iarahana midinika amin’izany.
^ feh. 7 Jereo ilay hoe “Resadresaka Mahaliana: Oviana no Nanomboka Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? Fizarana 1”, tao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Oktobra 2014.
^ feh. 9 Jereo ny Daniela 4:23-25.
^ feh. 11 Ny hoe “T.K.” dia midika hoe “Talohan’i Kristy”, ary ny “A.K.” hoe “Aorian’i Kristy.”
^ feh. 22 Jereo ny Apokalypsy 12:6, 14.
^ feh. 24 Jereo ny Nomery 14:34 sy ny Ezekiela 4:6.
^ feh. 24 Jereo ilay tabilao hoe “Ilay Nofin’i Nebokadnezara.”
^ feh. 28 Jereo ny Apokalypsy 6:4.
^ feh. 30 Jereo ny toko 9 ao amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Hizara Hizara Oviana no Nanomboka Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 2)